Gadziriro yemwaka wa2017-18
You are at:Home»NHAU DZEVARIMI»Gadziriro yemwaka wa2017-18
By Munyori weKwayedza on	 October 27, 2017 · NHAU DZEVARIMI
Simba Gotosa —
VARIMI, igaroziva kuti munogara muri pasi-pasi pemoyo yedu isu vekambani yenyu yeSeed Co. Ndosaka taona zvakakodzera kuti tirambe tichikuyeuchidzai magadziriro atingaita mwaka uno. Zvinogona kuti mumwaka wapera pane pakapotseka saka mwaka uno ngatichingwarirai kuti goho redu rikure.
Kuronga kwedu kunobva pakuziva kuti iyo mvura inotarisirwa mwaka uno yakambowanda sei.
VaJohn Mupuro, vebazi reMeteorological Services Department, vanoti mumwedzi waGumiguru kusvika Zvita 2017, vanotarisira kuti matunhu ari muRegion 1 anoti Harare, nzvimbo zhinji dzeMashonaland East, Mashonaland West, Mashonaland Central, kuchamhembe kwakadziva kumabvzuva kwe- Midlands nenzvimbo zhinji dziri kuManicaland seChipinge kuri kutarisirwa kunaya mvura ine huwandu sehwatagara tichiwana kana kudarika. Vanotarisira kuti matunhu eRegion 2 anoti dzimwe nzvimbo dzeMatabeleland North, dzimwe nzvimbo dziri kudunhu reMidlands nekuMashonaland West dziri kutarisirwa kuwana mvura ine huwandu hwatinowanza kuwana kana kuita shoma.
Masvingo nedzimwe nzvimbo zhinji dzeMidlands uye dziri kuchamhembe kweManicaland nedzimwe dzekuMatabeleland dzinotarisirwa kunaya mvura ine huwandu hwatinowanza kuwana kana kuita shoma. Mumwedzi waNdira kusvika waKurume 2018 kunotaririsirwa kuti nyika yose ichawana mvura ine huwandu hwatinowanza kuwana kana kudarika. Chikamu chinoona nezvemamiriro ekunze chicharamba chichiongorora zvose zvine chekuita nemanairo emvura muZimbabwe, nekudaro chichange chichizivisa veruzhinji zvinotarisirwa kuti mwaka wemvura uchange wakaita. Pamusoro pezvo, veruzhinji vachaziviswa nezvemamiriro ekunze mazuva ose pamwe nemukati memazuva gumi.
VaMupuro vanoenderera mberi vachiti kune varimi vaya vanotarisira mvura yemudenga chete, ngavazive kuti mvura yemuna Gumiguru inoshanduka shanduka asi inozotanga kunaya zvakanaka muna Mbudzi. Vanoti zvakakosha kukasira kuita zvirongwa zvekuwedzera huremu hwemvura mumakore kuitira kuti inaye yakawanda semuRegion 2 ne3.
Nekuda kwehunyoro hwakawanda huri muivhu pamwe nemamiriro ekunze, vane madiridziro vanogona kutanga kudyara mbeu dzavo izvozvi nekuti mbesa dzinodawo panoti dziyeyi kuti dzimere. Kana tichitarisira kuita mbeu mbiri pagore muZhizha nemuChando, mhando dzembeu dziri muchikwata cheNzou SC 719 ne SC 727 ngadzichitotanga kukandiwa pasi izvozvi.
Veruzhinji vanokurudzirwawo kuenderera mberi nechirongwa chekuchengetedza mvura painenge ichinaya. Vanotizve kudzikwa kwemitemo yekuvaka madhamhu madiki, kucherwa kwezvibhorani pamwe nekuchengetedzwa kwematoro kunofanira kuenderera mberi, zvikuru sei kumatunhu ari kumaodzayemba kwenyika.
Kuiswa kwefetereza kunofanira kuitwa pachitevedzwa mashoko emamiriro ekunze anobuda mushure memazuva gumi pamwe nekupihwa ruzivo nevarimisi veAgritex nevarimisi vemakambani akaita seSeed Co. Varimi tikanyatsoongorora zvatsetsenurwa navaMupuro tinoona kuti vose vari muRegion 1 ne2 ngatitange neSC719, SC727 totevera neSC633, SC637 kana mwaka wafamba kandima kadiki kekupedzisira toisa vana SC529.
Vari muRegion 3 ngatitange neSC627, SC633 neSC637 toteverawo neSC513, SC529 neSC533 kana zvaoma tozopedzisira neSC403. Kuvarimi vari muRegion 4 ne5 ngatitange neSC513, 529, 533 totevera neTsoko yedu SC 403 kana toenda kupera kwegore topedzisa nekaTsuro SC301.
Mukushanda kwatinoramba tichiita isu veSeed Co nemasangano evarimi, takapihwawo kurudziro iri kubva kuna sachigaro weFederation of Farmers Union, VaWonder Chabikwa avo vari kutiyeuchidza kuti mwaka wa2017-18 wasvika. Vanoti varimi vanotarisira kuti mwaka uno uchange wakanaka kupfuura wegore rapera, uye kuti varimi vanotarisira kuwana zvibatiso zvavo nekukasika uye zvichiuya zvakakwana.
Sevakuru vemasangano evarimi, vanotarisira kuti mitengo yezvibatiswa icharamba yakadaro kana kudzika. Vanotizve varimisi vemakambani akaita seSeed Co neveAgritex ngavarambe vachipa varimi ruzivo rwapamusoro ndiko kuti goho ravo rikwirire. Murimi woga-woga anoda chikafu chakakwanira mhuri nezvipfuyo zvavo uye chekutengesa kuti mhuri yose yeZimbabwe igute, zvese zvichitanga nekusarudza mbeu yakanaka.
VaChabikwa vanoti vari kufadzwa nevanoita zvemadiridziro uye nemabhadharirwo ari kuitwa varimi neGMB. Vanotizve vaporofita venhema vakanyadziswa apo varimi vakatsigira zvirongwa zveHurumende nokubva mvura yanaya iko zvino angova matura fashafasha. Vanoti ivo vanotenda makambani anoramba achiuchika mbesa dzapamusoro uye bazi reHurumende reSeed Services iro rinotsigira kuburiswa kwembeu.
Mwaka iri kungoramba ichisanduka nekudaro vanoti varimi ngavaonekwe vachitora maInsurance nekuti kana pane zvakashata zvinogona kuitika, zvinoda kudzivirirwa. Varimi vanofanira kusarudza zvine ungwaru mabhanga ukushanda nawo.
VaChabikwa vakapedzisa nekukurudzira varimi kuti vatsigire zvakakwana zvirongwa zveHurumende seCommand Agriculture nePresidential Input Scheme nekutizve vatsigire kambani dzinavo pamoyo.
Va Paul Zakaria, vanova Executive Director weZimbabwe Farmers’ Union, vanoti pari zvino murimi wese anofanira kunge ava nezvekurimisa zvakakwana uye varimi vanokurudzirwa kusarudza mbeu dzinoenderana nenzvimbo dzavanobva. Vari kunzvimbo dzine mwaka uchanonoka kutanga vanokurudzirwa kusarudza mbesa dzinokasika kuibva uye dzinoshingirira muzuva. Vane madiridziro vanokurudzirwa kusamirira mvura yemudenga asi kutodyara nemvura yemadiridziro.
Vanoenderera mberi vachiti varimi vanokurudzirwa kuterera mamiriro ekunze emazuva gumi ari kutevera (10-day forecast). Kuti murimi azive nezvemamiriro ekunze, vanofanira kuenda kune veMet Department vanowanikwa mumatunhu ese emunyika.
Tinozviziva kuti izvozvi varimi vari kumhanyamhanya kutsvaga mbeu dzavanoda dzeSeed Co nekudaro hatidi kuti munetseke tinokupai mazita ose evarimisi veSeed Co vanoshandira mudunhu renyu.
Social Shava – Mashonaland Central (Mazowe small-scale, Guruve, Mbire, Centenary 0775841534)
Robson Musimudziwa – Mashonaland Central (Bindura, Shamva, Mt Darwin, Rushinga, 0774432641)
Omega Chigwanda – Manicaland (Makoni, Buhera 0731037751)
Dumisani Mapungwana – Manicaland (Nyanga, Mutasa, Mutare, Chimanimani, Chipinge, 0772897495)
Davison Machaya – Masvingo (Gutu, Chartsworth, 0773207055)
Godfree Magavhu – Masvingo (Zaka, Bikita, 0773619066)
Stanley Nyoka – Masvingo (Masvingo District, Chivi, Mwenezi, Chiredzi, 0779037752)
Simba Gotosa, mukuru wavo, (0779830450)
John Moyo – Midlands (Zvishavane, Mberengwa, 0779037745)
Ronny Chigombe – Midlands (Shurugwi, Mvuma, Gweru, Kwekwe, Gokwe North neSouth, 0772240846)
Wallace Banda – Matabeleland North neSouth (0778499940)
Godwill Macherera – Mashonaland West (Sanyati, Mhondoro Ngezi, Chegutu, 0772939308)
Trust Muzvozviona – Mashonaland West (Kariba, Zvimba, Hurungwe, Makonde, 0772832876)
Charles Munyoro, mukuru wavo (0772243480)
Phillip Matombo – Mapurazi makuru (0772572497)
John Basera, mukuru wavo (0772413184)
Mbeu dzese dze SeedCo dzava kuwanikwa mu- zvitoro zvikuru zvakafanana neN. Richards, Metro Peech, OK, Mahommed Musa, Farm&City, FarmBiz, Amonsalt, TM, Bulawayo Seed Centre, NTS, Mantan Investments, Wiruma, MFS, Omnia, Choppies nezvimwewo zvitoro nyika yose. Isu veSeed Co tinokushuvirai mwaka wakanaka.